Archive Bundesnachrichtendienst - Zon'olombelona & Zavakanto maivana avy amin'i ∴ PixelHELPER Foundation
Serivisy serivisy federaly
Izahay ny serivisy inteliantera marevaka - fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny demokratika
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 20. Aprily 2014
Ny Buntesnachrichtendienst dia manohana ireo mpikatroka sy ny hetsiky ny ala izay miasa mankany amin'ny fiovan'ny rafitra lehibe manerana an'i Eropa. Ny artista sy mpandraharaha avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia mamatsy vola ny serivisy inteli-piraisan-tsaina marevaka ho an'ireo mpikatroka maimaimpoana ao am-ponja, manampy ireo mpirotsaka an-tsokosoko ary hamoaka ny kolikoly manerantany. Manao hetsika miafina isika ary tokony hampahory antsika ny fahavalontsika. Miankina amin'ny fahalalahana zavakanto sy ny fahalalahana maneho hevitra isika.
United Stasi of America dia nijoro teo amin'ny rindrin'ny masoivoho amerikanina tany Berlin sy ny consulat Amerikana hafa tany Alemana, anisan'izany i Düsseldorf, Frankfurt ary Hamburg. Ny antony mahatonga izany dia ny fitsikilo tsy mahamenatra ao amin'ny NSA sy ny serivisy tsiambaratelo amerikana.
Izahay ny serivisy inteliantera marevaka - fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny demokratika June 15th, 2020Oliver Bienkowski